Bootloader Unlock Mi5s – Hein Htet Kyaw
By Hein Htet Kyaw November 13, 2017 1 Min Read
ဒီဟာကိုရေးရတာကတော့ Mi5s မှာ Firmware တင်မယ့်အကြောင်းကိုရေးချင်လို့ ဒါကိုအရင်ရေးလိုက်ရတာပေါ့လေ Bootloader က တော်တော်များများသော ဖုန်းတွေမှာ Locked ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ဖြစ်ရခြင်းကလဲ lock ဆိုတော့ စိတ်ချတယ် ဘာညာပေါ့လေ ကိုယ်လဲ အဲဒီလောက် သိပ်မသိဘူး 😛 မသိဆို အဲဒီလိုင်းလဲ သိပ်မလိုက်ချင်ပေမယ့် ကိုယ် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာ Bootloader Unlock လုပ်ရတာတွေက ပါလာတော့လဲ သူ့ကိုဘယ်လိုဖြည်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ သိအောင်လေ့လာထားလိုက်ရတာပေါ့လေ။
လုပ်ပြီးသွားရင် ota update လဲရသေးသလို twrp or cwm လို custom recovery တွေကိုသွင်းပြီးတော့ flash တယ် ဘာညာအဆင့်တွေလဲ လုပ်လို့ရပါသေးတယ် flash ရင် ဘာရလဲဆိုတော့ Xposed or Something like that ပေါ့လေ Xposed, SuperSu, Magisk Manager, … အများကြီး flash လို့ရပါတယ် flash တယ်ဆိုတာကလဲ Install zip file ကိုပြောတာပါ။ ကိုယ့်ပေါင်ကို ပြန်ထောင်းရရင်တော့ flash တယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိလို့ တစ်ပါတ်လောက်တိုင်ပတ်ဖူးသေးတယ် Googling လုပ်ကြည့်တော့လဲ Myanmar နိုင်ငံရဲ့ Copy Master ကြီးတွေရဲ့ flash လိုက်ပါဆိုတဲ့ စာလုံးကိုပဲတွေ့ရတယ် ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ Copy Master တွေအကြောင်း နောက်မှ ကလော်အုံးမယ် 😛 flash တယ်ဆိုတာကတော့ cwm or twrp အတွင်းမှာရှိတဲ့ Install ဆိုတဲ့အရာကနေပြီးတော့ လုပ်ရတာပါပဲဗျာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး 😀 ကဲကဲဒါကိုထားပါတော့လေ … ဆက်ရရင်တော့
အရင်ဦးဆုံး လိုအပ်တာတွေကတော့ Xiaomi Account ရယ် ကွန်ပျူတာရယ်ပေါ့ အရင်ဆုံး Unlock Now !!! မှာ ကိုယ့်အကောင့် Bootloader Unlock လို့ရအောင်လုပ်လိုက်ပါ တရုတ်လိုဖြစ်နေရင် အောက်နားလေးမှာ English ကိုပြောင်းပြီးတော့ ကိုယ့်အကောင့် Information နဲ့ ဝင်လိုက်ပါ အကောင့်တစ်ခုကို ၁ လ လား ၃ လလားမသိဘူး ဖုန်းတစ်ခုကို Unlock လုပ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ Bootloder Unlock လုပ်ဖို့ဆိုရင် အရင်တုန်းက ၃ လလောက်ကြာမှရပေမယ့် အခုတော့ ချက်ခြင်းဆိုသလိုပဲ ၁ ပါတ်အတွင်းအမြန်ရပါတယ် တစ်ပါတ်မဟုတ်လဲ ပိုမြန်ရင်လဲမြန်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ကဲရသွားပြီပဲထားပါတော့ … Download Mi Unlock လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ Installation လေးလုပ်ပေါ့ဗျာ ဒါကတော့ Tool အပိုင်းခဏပြီးတယ်ပဲထားလိုက်ပေါ့လေမပြီးချင်ရင်လဲ Tool Install လုပ်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်အကောင့်ကိုဝင်လိုက်ပါ။ Check if your Mi Account has Permissions ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်သွားပြီးရင်တော့ Bootloader Tool Index ဖြစ်တဲ့ Unlock လုပ်ဖို့ Process လေးကတော့ အောက်ကဟာတွေဆက်ဖတ်ရင်သိလာပါလိမ့်မယ်
နောက်ထပ်လုပ်ရမှာကတော့ ဖုန်းမှာ Settings > About Phone > Miui Version ကို ၇ ကြိမ် နှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ Your’eaDeveloper ဘာညာဆိုတဲ့ စာတန်းလေးပေါ်လာပြီးရင် Settings > Additional Settings > Developer Options လေးမြင်ရပါလိမ့်မယ် အဲဒီအထဲမှာ USB Debugging ကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ Allow USB Debugging ? ဆိုပြီးမေးလာရင်တော့ OK ပေါ့လေ ပြီးရင် mac address လိုမျိုး address ကို access လုပ်မှာလားဆိုရင်လဲ Ok ပဲပေးလိုက်ပါ။ ဒါပြီးရင်တော့ Setting ထဲမှာ Mi Account ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ကိုထည့်ပြီးပေးဖို့တော့လိုပါတယ် ဒါမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်း။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ သိပြီး Detect ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရမှာပေါ့လေ ဒီအဆင့်တွေပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းကို ရိုးရိုးတန်းတန်းပိတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲဒါပြီးရင်တော့ Volume Down ( – ) Key နဲ့ Power ကိုဖိပြီး Fastboot ဆိုပြီး Android ကိုဘာညာလုပ်နေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာရင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ကို Cable ချိတ်ပေးလိုက်ပါ
ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ Detect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Phone Connected လေးရဲ့ အောက်မှာ Mi Phone ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအထဲကမှ Unlock ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ …Verifying Device , Unlocking , Done ဆိုပြီးအဆင့် ၃ ဆင့်ရှိပါလိမ့်မယ် တစ်ခုစီလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ Unlock Successfully ဆိုပြီးတော့ Reboot Phone ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်အထိရောက်သွားရင်တော့ Bootloader Unlock လုပ်တဲ့အဆင့်က အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ဗျာ။
Reboot Phone ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Auto Reboot ကျသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဖုန်းက Unlock ဖြစ်သွားပါပြီ Unlock လုပ်ပြီးသွားရင် ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ CWM or twrp သွင်းလို့ရသလို Firmware သွင်းလို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အကယ်လို့သာ Bootloader Unlock မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Firmware တင်ရင် Flash xbl error ဆိုတာပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျော်လုပ်ချင်ရင်တော့ edl mode ကနေပြီးဝင်လုပ်ရင်တော့ရပါတယ် အခုလိုလုပ်တာကိုတော့ အဆင့်အတန်းရှိရှိလုပ်တယ်ပေါ့လေ ငိငိ 😛 ကဲဒီလောက်ဆိုရင် ရေးချင်တာရေး ဖတ်ချင်တာဖတ်ပြီး Error ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Facebook or ဒီ Post အောက်မှာ Comment ပေးထားခဲ့ရင်ရပါပြီဗျာ တစ်ရက် ၂ ရက် ၃ ရက် ၁ ပါတ် ၁ လအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ် 😛 စတာပါ တွေ့တွေ့ခြင်းတော့ Reply ပြန်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။ နောက်ထပ် Firmware တင်နည်းကို ဆက်ရေးပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။
Bootloader Unlock လုပ်ထားရင်လဲ ota ( Over the Air ) update ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာ ပြဿနာထွေထွေထူးထူးတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ အကယ်လို့သာ
Stock rom (with or without root)
ထဲက တစ်ခုခုကိုသာပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ota လဲပျက်ကောင်းပျက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ xD